Tuesday September 18, 2018 - 13:44:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wasaaradda difaaca dowladda Ruushka ayaa xaqiijisay in diyaarad melleteri loogasoo riday gobolka Laadiqiyah ee dhacda galbeedka wadanka Suuriya, diyaaradda oo caga dhigan laheyd garoonka melleteriga Al Xumeymiim ayaa lala helay gantaal.
Ruushku waxay xaqiijiyey in ay heleen burburka diyaaradda iyo Meydadka askarta ku dhimatay, diyaaradda soo dhacday waxaa gantaal lahelay ciidamada difaaca cirka Nidaamka Bishaar Al-asad.
"diyaaraddu waxay usoo dhacday habdhaqanka cadawtooyo ee israa'iil ka waddo dalka Suuriya laakin Moscow waxay ka gaabsanaysaa in ay jawaab celin ka bixiso wixii dhacay"ayaa lagu yiri warka kasoo baxay dowladda Ruushka.
Xilligii diyaaraddu soo dhacaysay ayay diyaaradaha dagaalka maamulka Yahuudda waxay duqeymo ku hayeen saldhigyo melleteri oo maleeshiyaadka iiraan iyo kuwa Bishaar Al-asad ku lahaayeen galbeedka Suuriya.
Gantaallada Casriga ah ee S200 oo dowladda Ruushka ay sanado ka hor ka iibisay dowladda Suuriya ayaa la xaqiijiyay in ay dhulka soo dhigeen diyaaradda melleteri ee Russia lagasoo riday.